बेलुकीको ०४ : २०
काठमाण्डाै – देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले ग्...
अप्टिकल फाइबरको सरकारी परियोजनामा चरम ढिलासुस्ती, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने योजना अलपत्र
काठमाडौं । देशभरका सबै क्षेत्रमा उच्चगतिको इन्टरनेट पुर्‍याउन भन्दै अगाडि बढाइएको सरकारी परियोजनामा चरम किसिमको ढिलासुस्ती देखिएको छ । परियोजनाको जिम्मा पाएका कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम गर्न नसक्द...
dcnepal.com . २ महीना अघि
काठमाडौँ । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले ग्रा...
देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य, कति भयो प्रगति ?
देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु-याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चा...
काठमाडौं । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणले ग्रा...
काठमाडौं- देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएका १८ परियोजनाको ६९ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म १८ ब्रोडब्यान्ड पर...
दूरसञ्चार प्राधिकरणद्वारा ६९ प्रतिशत इन्टरनेट जडान
file photo काठमाडौं । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । प्राध...
ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडानको काम ६९ प्रतिशत सम्पन्न
मंसिर १०, काठमाडौं । देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम्पन्न भएको छ । प्राधि...
काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले केही समयअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अनिवार्य रुपमा टोल फ्री नम्बर राख्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनका आधारमा हाल ३० इन्टर...
देशभर ६९ प्रतिशत मात्रै इन्टरनेट जडान !
सञ्चार संवाददाता २ मिनेट पहिले काठमाडौँ-देशैभर उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको परियोजनाअन्तर्गत कात्तिक मसान्तसम्म ६९ प्रतिशत जडान सम...